श्रीमति मिडियामा आएको १२ घण्टा, नहुँदै, २५ लाख रुपैया ऋ,ण बोकाएर बेप,त्ता भएका श्रीमान फेला परे, त्यसपछि भयो यस्तो, बबाल! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमति मिडियामा आएको १२ घण्टा, नहुँदै, २५ लाख रुपैया ऋ,ण बोकाएर बेप,त्ता भएका श्रीमान फेला परे, त्यसपछि भयो यस्तो, बबाल! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । श्रीमतीलाई २५ लाख रुपैया ऋ,ण बोकाए,र बेपत्ता भएका रुकुमका एक पुरुष श्रीम,ती मिडियामा आएको १२ घण्टा, नबित्दै, फेला प,रेका छन् । तीन बच्चाको आमालाई* छोडेर हिडेका, उनका श्री,मान, ,श्रीम,ती मिडियामा आएको केही* व*र्षमा फेला ,परे,का हुन् । उ,नी काठमाडौमै ,फेला परेका छन् । रुकुमकी हिरा वलीका श्रीमान काठमाडौमा फेला परेका, हुन् ।
भिडियो, हेर्न ,तलको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस
श्रीमान%ले लिएको ऋण नतिरिदिएपछि% साहुअरु आएर घरमा आएर भन्न थाले%का छन् <। विदेश जाँदा र आ%फ्नो जिवन चलाउँदा लिएको ऋ,ण लिएका ,थिए, । अहिले त्यो बढेर झण्डै २५ ला%,ख पुगकेो% ,छ <। श्रीमान वेपत्ता, छन्, ऋण% तिर्ने वा%स्ता नग%रेका कारण उनले मिडि%याको सहारा लिएकी थिइन् । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस